I-Eco Chic Suite ikufuphi neeNtaba kunye neMigodi 🏔 🚲 - I-Airbnb
I-Eco Chic Suite ikufuphi neeNtaba kunye neMigodi 🏔 🚲
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguHeidi
Ikhaya kwaye liqaqambile eli nqanaba legadi yabucala leendwendwe linayo yonke into oza kuyidinga kwiholide ezele kukuhleka kunye nokuzonwabisa! I-suite yakho ibandakanya ikhitshi eligcweleyo, iibhedi ezinobukhulu benkosi kunye nokumkanikazi kunye ne-rustic yangaphakathi. Kuphela yimizuzu emi-5 yokuqhuba ukusuka edolophini entle eGolden, Coors, iibreweries, kunye nololiwe olula ukuya edolophini iDenver. Malunga nemizuzu eyi-15 ukusuka kwiAmphitheatre yaseRed Rocks. Sikwabandakanya i-snowshoes, iityhubhu zangaphakathi, kunye neebhodi ze-snowboards (ukuba zifanelekile wamkelekile kuzo!) Ukuzonwabisa ngexesha lokuhlala kwakho!
Sinobubele bezinja ngexesha elinye i-50 yentlawulo yokugubungela ukucoca okongeziweyo kunye nokunxiba okuqhelekileyo kunye nokukrazula.
Sikholelwa kubunewunewu be-eco conscious. Ukulinganisa ingaphandle kunye neentaba, sizame ukunika indawo egcwele imvakalelo yokuba ngumhambi wangaphandle ngelixa ngaxeshanye sithuthuzelekile yimvakalelo yekhaya kunye nekhaya. Indawo yethu yegadi iyakumema ukuba uphumle kwaye wonwabele iMesa vistas, uthi nkxu iinyawo zakho kumanzi amatsha eNtaba yeRocky, okanye ushukume eRed Rocks.
Yiza wonwabele ubusuku kwi-1500 yamaphepha e-bamboo, kwaye ufudunyezwe ngamanqwanqwa ahonjiswe ngezandla aziswe kuwe yinzalelwane yase-Iowan enobuchule, iinkcukacha, kunye nomfanekiso ngqondweni waziwayo.
Bonke ubugcisa bethu buthathwe ngesandla kumagcisa asekhaya anothando lwangaphandle kunye neColorado. Akukho mithi yenzakaliswayo ekwenzeni udonga lomthi we-aspen olujingayo njengoko yafunyanwa kumthi owileyo kwaye yakhethwa ukuba uyonwabele. Imifanekiso izotywe ngesandla/yapeyintwa kwaye yonke iyintsusa. Ukuba ubona into oyithandayo kwaye awukwazi ukuphila ngaphandle kwayo sicela usazise njengoko ezinye iziqwenga zithengiswa.
Uninzi lwefenitshala yenziwe ngesandla ngamaplanga aphinde asetyenziswa kwaye ayilwe ngokuvakala kweentaba engqondweni.
Iimveliso zethu zokucoca zonke zihambelana nokusingqongileyo nto leyo ethetha ukuba awuzukuva ukuvala inzala esibhedlele kodwa uya kubuliswa livumba elithozamisayo leentyatyambo zasendle kunye nesitrasi esitsha.
Nceda uqaphele: Kukho imigangatho yeenkuni kwinqanaba eliphezulu kwaye liza kunye nomlinganiselo othile wokuncwina xa uhamba. Ngelixa siyayazi le nto kwaye sizama ukuhamba ngokufanelekileyo, sifuna ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye konwabe kangangoko unakho ngoko ke nceda uyithathele ingqalelo xa ubhukisha ukuba unovelwano kwingxolo. Enkosi!
Sinethemba elikhulu lokuba ukuhlala kwakho kukuzisela ulonwabo, ubuthongo obunzulu, ukuthanda iColorado, kunye nokuhlaziya ulwazi lokudlala. Ukusuka kusapho lwethu lwe-wanderlust ukuya kweyakho, yonwabele!!
Inombolo yelayisensi: BCA-41935
4.86 · Izimvo eziyi-226
Ifakwe kwindawo ezolileyo ye-de-sac le yeyona ndawo ikhuselekileyo onokuthi uyindwendwele. Bonke abamelwane bamkelekile kwaye banobuhlobo kwaye ngamanye amaxesha ikati yasebumelwaneni iya kuphuma indwendwele. Sikwanyuka induli (uhambo lwemizuzu emi-5) ukusuka kwiiGrosa zeNdalo.
Sinomgaqo-nkqubo wocango oluvulekileyo kwaye siyakuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo, okanye, akufuneki unxibelelane nathi konke konke ukuba ukhetha ukuba wedwa ngoxolo!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Golden